Description/subject: စာအုပ်များရယူရန်..... ၁။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှလွတ်ကင်းရေး (အောင်ဆန်းစုကြည်) ၂။ အာဏာရှင်စနစ်မှသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီသို့ ၃။ ပိုမိုအားကောင်းလာသော ပြည်သူ့အင်အား ၄။ မဟာဗျူဟာမြောက်အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှု ၅။ ပြည်သူတို့၏လွတ်မြောက်ရာလမ်း ၆။ လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နည်း ၇။ လူထုတိုက်ပွဲမြေအောက်လက်စွဲ (မိုးသီးဇွန်) ၈။ နာခံမှုကိုစစ်ဆေးခြင်း (မိုးသီးဇွန်) ၉။ ပုန်ကန်သူလေး ၁၀။ ဦးနု၏ တာတေစနေသား ၁၁။ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရေး (သခင်မြသန်း)
Title: Depeyin Massacre ဒီပဲယင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု
Title: Panglong (Burmese) - ပင်လုံ (မြန်မာ)
Description/subject: A blog of Shan Herald... ရှမ်းသံတော်ဆင့်မှ တည်ထောင်သည့် ဘလော့ဂ် ဖြစ်ပါသည်။
Description/subject: Myanmar Politics, Arts ... မြန်မာနိုင်ငံရေး၊ အနုပညာ February 16, 2009
Description/subject: Politics... နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာစာပေဆောင်းပါးများ...
Title: Big Brown - ညိုကြီး
Description/subject: Politics and literature blog. နိုင်ငံရေးနှင့်စာပေအတွေးအခေါ်
Title: Fine Leaves - ရွက်မွန်
Description/subject: Politics... “ရွက်မွန်” ဆိုတာ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီးက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တခုရဲ့ အမည်ပါ။ ကျနော်တို့က ဘလော့နာမည်ပေးမယ် စဉ်းစားကြတော့ ဒီနာမည်ကလေးကို ကြိုက်လို့ယူလိုက်ပါတယ်။ သေချာတော့ မသိပါ။ ကွယ်လွန်သူ သမိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ဒီဆိုင်နာမည်ကို ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လို Fine Leaves ဆိုပြီး ဘာသာပြန်နာမည်ပေးတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အခု ရွက်မွန်ရိပ်မြုံ ကလေးမှာ ဆုံကြပါစို့။
Title: Htet Aung Kyaw - ထက်အောင်ကျော်
Description/subject: Literature and politics... စာပေနှင့် နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ်
Title: Yaw Han Aung - ယောဟန်အောင်
Description/subject: Politics Blog... နိုင်ငံရေးဘလော့ဂ် အရင်ကတော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ ကဗျာတွေ၊ စာတွေကို စုပြီး သိမ်းထားဖို့ရယ်၊ ဒိုင်ယာရီသဘောဆန်ဆန် ရေးပါတယ်။ အချိန်မရ တော့လည်း တခါတခါ အသစ်တွေ ထပ်ပြီး မတင်နိုင်ဖြစ်ရပါတယ်။ အခုတော့ Radio Free Asia (မြန်မာပိုင်း) မှာ ပုံမှန်ရေးဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် စာလက်ဆောင်ကဏ္ဍက ဆောင်းပါးတွေကိုပဲ ပုံမှန် တင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘ၀မှာ ကိစ္စများမြောင်ဆိုသလို အချိန်ကလည်း နည်းလှပါတယ်။ စာလေး ကဗျာလေးလည်း အေးအေးဆေးဆေး ရေးချင်ပါသေးတယ်။ မျက်စေ့လည် လမ်းမှားလို့ တခါတခေါက် ရောက်လာသူတွေရော၊ ပုံမှန် လာဖတ်ကြည့်နေတဲ့သူတွေပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...